အချစ် ဧဒင်ဥယာဉ် - ရွှေမြို့တော်
ဓာတ်ပုံအားလုံးဓာတ်ပုံဖိုင်အားလုံးမိမိဓာတ်ပုံများမိမိဓာတ်ပုံဖိုင်များကျွှန်ုပ် အနှစ်သက်ဆုံးထည့်မယ် အချစ် ဧဒင်ဥယာဉ်
ဇန်န၀ါရီလ 12, 2012 တွင် 12:10am အချိန် တွိ မှတင်သွင်းခဲ့သည်
နောက်သို့ | နောက်တခု
ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင် 13 ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
8:49pmမှာသြဂုတ်လ 14, 2014 တွင် +!!●♥ အဖြူရောင်ကောင်ကလေး+!!♥●• မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် good 5:46pmမှာဒီဇင်ဘာလ 24, 2013 တွင် စစ်သွေး မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် စစ်သွေးပြန်လာပါပြီ 5:32pmမှာဒီဇင်ဘာလ 24, 2013 တွင် စစ်သွေး မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် www. 12:35pmမှာဒီဇင်ဘာလ 21, 2013 တွင် မင်းထက်ဇော် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျင်ရာဖွေရှာပျိုကညာတို့
(phonehtethnan@gmail.com)သို့ဆက်သွယ်ပါ။ 12:33pmမှာဒီဇင်ဘာလ 21, 2013 တွင် မင်းထက်ဇော် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျင်ရာဖွေရှာပျိုကညာတို့
(phonehtethnan@gmail.com)သို့ဆက်သွယ်ပါ။ 8:32amမှာဒီဇင်ဘာလ 14, 2013 တွင် ညီညီ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် မျှော်လင့်ခြင်းသာ ငါ့ဘ၀မှာရှိခဲ့ရင်..... မင်းနဲ့ပြန်ဆုံချင်တယ် 9:12amမှာနိုဝင်ဘာလ 14, 2013 တွင် ရန်နိုင် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် မိုတွေဘယ်လောက်ရွာရွာ နေတွေဘယ်လောက်ပူပူ နှင်းတွေဘယ်လောက်ဝေေ၀ ငါရင်ထဲမှာမသေတဲ့ပန်းတပွင့်ရှိတယ် အဲဒါက မင်းကိုမေ့မရခြင်းဆိုတဲ့ ပန်းလေးပဲ 6:41pmမှာနိုဝင်ဘာလ 6, 2013 တွင် စိုးမင်းခန့် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် မှက်ချက်ပေးပြီးနော် ဟဲဟဲ 6:36pmမှာအောက်တိုဘာလ 16, 2013 တွင် FULL MOONလပြည့် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် လန်းတယ်ကွာ 12:13pmမှာစက်တင်ဘာလ 23, 2013 တွင် နှင်းဖွေး မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် very beautiful
+ အချစ်ဆုံးလေး +
လက်ဆောင်ပေးရန် Ah San
လက်ဆောင်ပေးရန် aung htet zaw
Shadow Demon အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
မီးမီး အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
ဇော်မျိုးနိုင် အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်